Momba anay - China SNS Pumatatic Co., Ltd.
Shina SNSNy pneumatika dia natsangana tamin'ny taona 1999 izay lasa mpamatsy singa pneumatika ao Shina ankehitriny. Ny orinasa dia manarona faritra 30000 ㎡, manana toby famokarana 5 ary mihoatra ny 20 ireo orinasa mpanampy manana mpiasa maherin'ny 1000. Ny SNS dia nandalo ISO9001 sy 2000 Quality Management System Certification noho ny serivisy tsara sy ny kalitao avo lenta. Amin'izao fotoana izao dia misy agents sy distributor 200 mahery manerana an'izao tontolo izao ary manantena ny hanatona tsena iraisam-pirenena bebe kokoa izahay.
Ny vokatra lehibe ateraky ny SNS dia ny fitambaran-drivotra, ny varingarina, ny valves, ny fittings, ny kojakoja hafa sns. Ny vokatray dia amidy tsara eraky Chine sy amin'ny tsena iraisam-pirenena any Azia atsimo atsinanana, firenena eropeana sy amerikanina, afovoany atsinanana, sns. SNS dia nahazo fahatokisana ny mpanjifa sy laza tsara.
Manizingizina ny fahamendrehana amin'ny mpanjifa, samy mahazo tombony amin'ny tsena, fanavaozana ary mihoatra ny tenany, SNS dia hahatratra ny ho avy miaraka amin'ny kalitao avo lenta.